यी खानेकुरा मिर्गौलाका शत्रु हुन् ! जसलाई हामी खाइरहेका छौँ « Lokpath
यी खानेकुरा मिर्गौलाका शत्रु हुन् ! जसलाई हामी खाइरहेका छौँ
हामीले खाएको खानेकुराबाट बनेका विभिन्न तत्त्वहरूलाई फिल्टर गरेर नचाहिने पदार्थलाई बाहिर फ्याँक्ने काम गर्ने मिर्गौला (किड्नी) नै हामीले खाएकै खानेकुराबाट कहिले काहीँ आफैँलाई सङ्कटमा पर्ने गर्छ ।
किड्नी हाम्रो शरीरको यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूको सन्तुलन कायम गर्ने गर्छ । यदि शरीरलाई नचाहिने हानिकारक एसिड जस्ता अरू पदार्थहरू बढी भएमा पिसाब मार्फत बाहिर फ्याँक्ने काम यसले गर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरको मिर्गौलाको विशेष किसिमले स्याहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि मिर्गौलालाई स्वस्थ बनाउने हो भने यी ५ किसिमका खानेकुराहरूलाई कमै खानु राम्रो हुन्छ ।
नुन हाम्रो शरीरलाई चाहिने पदार्थको रूपमा पर्छ । तर यसको बढी सेवन गर्दा हाम्रो मिर्गौलामा बढी दबाब पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले नुनको सेवन सीमित मात्रामा गर्नु नै राम्रो मानिन्छ ।
यदि खानपानको शैलीमा मदिरालाई टाढै राख्न सकियो भने यो जति राम्रो अरू केही नहुन सक्छ । मदिरा सेवनले केबल कलेजोलाई मात्र नभएर यसले मिर्गौलालाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ ।
रातो रङ्गमा आउने खसी, बोका, राँगा लगायत चौपाया जनावरको मासु सीमित मात्रामा वा कहिलेकाहीँ सेवन गर्नु मात्र शरीरलाई राम्रो हुन्छ । रातो मासुको धेरै सेवन गर्दा यसले शरीरको मेटाबोलिजममा असर गर्न थाल्छ । यो बाहेक रातो मासुको धेरै सेवन गर्दा मिर्गौलामा पत्थरी हुने सम्भावना पनि बढी हुने गर्छ ।
धेरै गुलियो भएको मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकिज जस्ता प्याकेजिङ गरिएका खानेकुराको नियमित सेवन कम गर्नु नै मिर्गौलालाई राम्रो हुन्छ । यस्ता किसिमका खानेकुरामा कृत्रिम गुलियोको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस्ता खानेकुराको नियमित सेवनले मिर्गौलालाई असर गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ ।
कफीको नियमित सेवन पनि मिर्गौलाका लागि राम्रो मानिँदैन । कफीमा क्याफिन भन्ने पदार्थ रहेको हुन्छ र यो मिर्गौलालाई असर गर्ने खालको हुन्छ । यदि मिर्गौलामा केही समस्या देखियो भने कफीको सेवन झनै गर्न हुदैंन । यसको सेवनले मिर्गौलामा पत्थरी बनाउने बढी सम्भावना हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,पुष,१५,बिहीवार १६:४४